Buqqaatonniifi aanga'oonni magaalaa Baatuu wal reeban - BBC News Afaan Oromoo
Buqqaatonniifi aanga'oonni magaalaa Baatuu wal reeban
"Rakkoowwan keenya harkifachaa dhufantu waldhabdee Sanbattaniif sababa ta'an" jedhu jiraataan naannoo Somaalee irraa buqqa'anii magaala Baatuu keessa qubatan.
Walitti bu'iinsa Sanbata xiqqaafi Dilbata ganama buqqaatota magaala Baatuu qubatan fi aangawoota magaala Baatuu gidduutti uumameen poolisii, hojjetaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalichaa dabalatee namoota biroo irratti miidhaan qaamaa qaqqabeera.
"Namootni lama rasaasaan rukkutamanii gara hospitaala keenyaa dhufaniiru" kan jedhan hoji gaggeessaan hospitaala Baatuu Obbo Idriis Shaarbee walumaagalatti madoolin sadi hospitaala isaanitti yaalamuu isaanii BBC'tti himan.
Haalli nageenyaa magaala Baatuu ammatti sadarkaa gaarirra akka jiru kantiibaan magaalichaa Obbo Alamuu Dawwaanoo himanis buqqaatun maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan "ammallee sodaa keessa jirra qe'ee keenya keessaayis bahu hin dandeenye" jedhan.
Sababa walitti bu'iinsaa…
Deggarsi nyaataa mootummaan erga taasifamef ji'oota sadi ol akka ta'e BBC'tti kan himan buqqaattotni magaala Baatuu jiraatan gaaffi deeggarsa nyaataa qabatanii sanbata xiqqaa ganama gara waajjira bulchiinsaa magaala Baatutti deemuu isaanii himu.
"Nyaata ijoolleef kenninu dhabnaan ijoollee guurrannee bakka waajjiraa deemne. Raashina barbaadna jechuunis gaafanne" jedhu haati BBC'tti dubbatan tokko.
Kanuma keessa hooggansa magaalichaa fi buqqaatota gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu isaa fi buqqaatotni heddu tumamuu isaanii himan.
Kantiibaan magaalaa Baatuu Obbo Alamuu Dawwaanoo gama isaaniitin sababni gaafi nyaataati jedhamee buqqaatotaan himamu sababa sobaa ta'uusaa dubbatu.
"Deeggarsi nyaataa erga taasifamee ji'a tokkoyyu hin guunne" jedhan.
"Haa ta'u malee karoorri buqqaatotni liqaa fudhatanii hojiitti yaa galan jedhu waan dhufeef akkasumas yaadni deeggarsi nyaataa ammaan booda namoota deeggarsa nyaataa hatattamaa barbaadanin alatti dhaabbachuu danda'a jedhuu caasaa sadarkaa oliitii waan dhufeef kanuma itti himne" jedhu Obbo Alamuun.
"Buqqaatotni gaafii nyaataa fakkeessuun guyyaa Sanbataa guyyaa hojiin mootummaa hin jirre gara waajjiraa deemuun waajjiraalee mootummaa, qaamolee nageenyaa fi namoota nagayaa reebuu akkasumas abbootii amantaa fi Gadaa arrabsuu eegalan" jedhan kantiibichi.
Sababa kanaanis komaandarri itti aanaa poolisii magaalichaa dhagaadhaan mataa dhahamuu fi jiraattotni magaalichaa biroon lama rasaasaan rukkutamuu isaanii Obbo Alamuun himan.
"Dhimmichi nyaataan kan wal hin qabannedha. Qaamni uummata naannoo fi buqqaatota walitti buusuuf socho'u kan jiru fakkaata" kan jedhan kantiibaan kun qaamni poolisii iddoo biraatti hojjetu fi buqqaatotatti makamee hiriira bahe to'annoo seeraa jala oolusaa dubbatan.
Waliigalattis namootni soddoma ta'an to'annoo jala oolanii qorannaan irratti taasifamaa akka jiru fi namootni qulqulluudha jedhaman jala jalaa akka gadi lakkifaman taasifamuu isaas kantiibichi himaniiru.
Qaamni sadarkaa naannoo jiru fi koreen dhimma buqqaatotaa hordofu nu dagataniiru kan jedhan buqqaatotni magaala Baatuu qubatan "namni maalirra gahan jedhee nu ilaalu hin jiru" jedhu.
Liqaa maallaqaa hojii akka ittin eegalaniif mijataafii jiru irrattis komii kan qaban buqqaatotni kun "liqaa birrii kuma digdamaa nu mallatteesisanii birrii kuma kudhan qofa fudhadhaa nun jedhan" jedhu.
Maallaqni kun waldaa aksiyoona liqaa fi qusannoo Oromiyaa WALQOdhaan akka kennamu kan himan kantiibaan magaala Baatuu Obbo Alamuu Dawwaanoo birrii kuma kudhan bifa qusannaan akka olkaawwatan taasifamuun qajeelfama dhaabbatichaa ta'uu BBC'tti himan.